Barcelona oo la ogaaday inay deymo fara badan ku jirto isla markaana soo amaahatay 140 milyan oo Euro! – Gool FM
(Barcelona) 12 Feb, 2019 Kooxda kubadda cagta Barcelona ee waddanka Spain ayaa la sheegayaa in ay lacag ay aad ugu baahneyd oo gaaraysa 140 milyan oo Euro (158 milyan oo dollar) ka soo amaahatay laba shirkadood oo Mareykan ah oo dhanka maalgashiga qaabilsan.
Wargeyska maalinlaha ah ee ‘El Pais’ ee ka soo baxa Spain ayaa maanta qoray in labada shirkadood ee kala ah Pricoa Capital Group iyo Barings ay 90 milyan oo Euro iyo 50 milyan oo Euro si isdhaaf ah u amaahiyeen naadiga Barcelona, si ay gurmad ugu noqoto suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Warsiduhu wuxuu intaa ku daray in Barcelona aysan xitaa qorshaha ugu jirin in 5 sanadood ay lacagtaasi ku bixiso, taa beddelkeedana waxay aqbashay in lacag dulsaar ah (interest) lagu kordhiyo.
Dhanka kale naadiga Barcelona ayaa sanadkii la soo dhaafay waxaa u soo xarooday 914 milyan oo Euro (1.03 bilyan oo dollar), laakiin in ka badan 500 oo milyan oo Euro ayaa waxa ay ku bixisay mushaarka ciyaartoydeeda.
Barcelona ayaa waxaa lagu leeyahay deyn korortay oo gaareysa 177 milyan oo Euro (200 milyan oo dollar), waloow cadadka rasmiga ah ee deynta lagu leeyahay Barcelona ee ay u gudbisay La Liga ay gaareyso 160 milyan oo Euro (180 milyan oo dollar).
Spanish soccer giants Barcelona have reportedly secured €140 million in loans from two US investment firms to provide emergency relief in case of need for transfer funds https://t.co/Y0tC3nUw72 #Barca #LaLiga #SportsBiz
— SportsPro (@SportsPro) February 12, 2019
Iniesta; "Aad bay iigu adkaatay in anigoo Barcelona usoo dheelay aan la qabsado kooxdayda Vissel ee Japan"